संरक्षक नै बलात्कारी - फ्री प्रेस नेपाल
८ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:१६
in अन्तर्वार्ता, समाज
बलात्कारीहरू अधिकांश बुवा, काका, दाजु–भाई, शिक्षक, प्रेमी, साथीहरू नै हुन्छन् । बालिकाले जसलाई संरक्षक ठानेका हुन्छन् तिनैले उनीहरूमाथि बलात्कार गरिरहेका छन् । हाम्रा घरहरू सुरक्षित छैनन् । विद्यालयहरू सुरक्षित छैनन् ।
महिलाको मञ्जुरी या इच्छाबिना गरिने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार भनेर बुझ्नुपर्छ । बलात्कारलाई यौनहिंसाको चरम रूप मानिन्छ । बलात्कार सम्बन्धमा अहिले हामीकहाँ भएको कानूनी व्यवस्था बलियो नै छ । १० बर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १८ देखि २० वर्ष सजायँ छ । हाड–नाता करणीमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । समस्या कार्यान्वयन नहुनु हो ।
हाम्रो समाजमा कैयौं बालिका बलात्कृत भएका छन्, तर कतिजना बलात्कारीलाई २० वर्ष जेल सजायँ भयो ? बलात्कारीलाई मान्छे मारे सरहको जेल सजायँ हुन्छ भनेर हामीले प्रचारप्रसार नै गर्न सकेनौं । यो स्तरको जनचेतना जगाउनै सकेनौं । यदि यो कानुनी व्यवस्थालाई फैलाउन सकेको भए बलात्कारीको मनोबल घट्न र बलात्कारका घट्ना कम हुन सक्थ्यो ।
कार्यान्वयन पक्ष बलियो नबनाई कानून कडा बनाएर र त्यसलाई संसदबाट ताली बजाई पारित गरेर मात्र बलात्कार जस्तो अपराध नहट्दो रहेछ । यसलाई कार्यान्वयन तहमै लैजानुपर्दाे रहेछ । पीडितलाई प्रहरीसम्म पुग्ने र त्यसपछि अदालतमा मुद्दा लड्ने वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्दो रहेछ ।
हाम्रा प्रहरी प्रशासन र न्यायालय बलात्कार जस्तो अपराधमा असम्वेदनशील देखिन्छन् । नेपाल प्रहरीले मुद्दालाई जसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो, बढाउन सकिरहेको छैन । बरु उसले कैयौं केसमा मेलमिलाप गरेर आउनोस् भनेर अपराधको ढाकछोप गर्दै आइरहेको छ । अदालतले पनि बलात्कारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिदिने गरेको छैन ।
बलात्कारका मुद्दामा कानूनले राम्ररी काम नै गर्न सकेन । केही मान्छे जेल त परे, तर ती छिटै छुटे । बलात्कार जस्तो अपराधमा पनि मेलमिलाप गर्न लगाइयो । यसको परिणाम हामी अहिले भोगिरहेका छौं । हाम्रा छोरी चेलीहरूमाथि हुने बलात्कारका घटनाहरू दिन दुगुणा रात चौगुणा हुँदै गैरहेका छन् ।
बलात्कारीहरू अधिकांश आफन्त र नजिकबाट परिचितहरू नै हुन्छन् । बुवा, काका, दाजु–भाई, शिक्षक, प्रेमी, साथीहरू । बालिकाले जसलाई सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेका हुन्छन्, जसलाई संरक्षक ठानेका हुन्छन् तिनैले उनीहरूमाथि बलात्कार गरिरहेका छन् । हाम्रा घरहरू सुरक्षित छैनन् । विद्यालयहरू सुरक्षित छैनन् । हाम्रा चेलीबेटीहरू आफन्तबाटै असुरक्षित छन् ।
म यसलाई विकृत मानसिकताको उपज ठान्दछु । हाम्रो समाजमा नाबालक मात्र होइन हजुरआमाहरूसम्म बलात्कृत भैरहेका छन् । त्यो उमेरकालाई सम्म नछाड्ने भनेपछि हामी कुन मानसिकताले निर्देशित भैरहेका हौंला ? यस बिषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी देखिन्छ । हामी कहाँ छौं भनेर आफैँले आफूलाई हेर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । यो व्यक्ति र समाजको मात्र होइन, यो त समग्र राज्यव्यवस्थाकै लज्जाको विषय हो ।
अव आफ्नै पारिवारिक संरचनाको पनि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । बलात्कारी जन्मनुमा हाम्रो घरपरिवार र समाज पनि दोषी छ । हामीले वर्षौंदेखि छोरीलाई नैतिकताको पाठ पढाउँदै ‘यो गर त्यो नगर’ भन्दै हुर्काउँदै आयौं । तर छोरालाई जे गरेपनि खुल्ला छाडिदिने ग¥यौं । तिनलाई कहिल्यै छोरीलाई जस्तो के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर सिकाएनौं । बरु ‘तिमीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने पाठ पढायौं । यस्तो हुर्काइले छोरी अनुशासित हुँदै गए भने छोरा उद्दण्ड बन्दै गए ।
हाम्रो शिक्षाप्रणाली पनि दोषी छ । प्रजातन्त्रपछि नैतिक शिक्षा हटाउनु पर्छ भनियो । संसारमा कहिँ त्यस्तो छैन । विश्वभर सभ्य नागरिक उत्पादन गर्न ‘नागरिक र नैतिक शिक्षा’ दिइन्छ । हामीकहाँ चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि नैतिक शिक्षाको पाठ नै हटाइयो ।
हामीकहाँ चर्चा नै नगरिने अर्काे बलात्कार हो– वैवाहिक बलात्कार । महिलाका विषयवस्तुसम्बन्धी कार्यक्रम लिएर देशभरका दिदी–बहिनीहरूसँग छलफल गर्दा वैवाहिक बलात्कार एकदमै बढी भैरहेको सुनेको छु । घरघरमा वैवाहिक बलात्कार छ । हाम्रा ओछ्यानहरू सुरक्षित छैनन् । हाम्रा ओछ्यानहरू सुमधुर छैनन् ।
राम्रो पक्ष के हो भने विश्वका थोरै देशहरूमध्ये हामीकहाँ वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । दुखःका साथ भन्नुपर्छ यो कानुनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अत्यन्त थोरैले मात्र मुद्दा हालेका छन् । मलाई श्रीमानले बलात्कार ग¥यो भनेर मुद्दा लिएर को अगाडि बढ्ने ? जसको संरक्षणमा बसिरहेको छ, उसैको बिरुद्ध कसरी मुद्दा हाल्ने भनेर पीडितहरू नै खुम्चिएर बस्न बाध्य छन् । ती उजुरी लिएर प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दै पुग्दैनन् । श्रीमानले पनि बलात्कार गर्छ र भन्ने मानसिकता छ । कथंकदाचित प्रहरीकहाँ पुगेपनि हाँसेर उडाउने गरिन्छ ।
विवाह गरेपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचका कारण लोग्नेले श्रीमतीलाई बलात्कार गरिरहेको हुन्छ । महिलाले सम्बन्ध भन्ने कुरा मानसिक हो भनि हेर्छन् तर पुरुषले यस्तो तयारीबिनै जबर्दस्ती गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू यति धेरै छन् कि कहिलेकाहिँ यस्तो लाग्छ, कतै म बलात्कारै बलात्कारले पीडित महिलाहरूको बीचमा त छैन ?
अचम्म के भएको छ भने कुनै बेला स–सानो कुरामा ह्वार्र बाहिर निस्कने हाम्रा नागरिक समाजका सदस्यहरू यस्तो बेलामा पनि मुख खोलिरहेका छैनन् । २०४६ र २०६२–६३ का आन्दोलनमा मुखरित भएर निस्केका उनीहरू अहिलेपनि यहीँ छन्, तर मौन ।
हाम्रो नागरिक समाज राजनीतिक रूपले असाध्यै विभाजित छ । सडकमा आउँदा आफ्नो सत्तालाई अप्ठेरो पर्छ भनेर शायद ती नबोलेका होलान् । नागरिक समाजभित्र राजनीतिकरण भयो भने कति संवेदनहीन हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण बलात्कार प्रकरणमा तिनको मौनताले दिइरहेको छ । अब हामीले हाम्रो नागरिक समाज को रहेछन्, के गर्दा रहेछन् भनेर विश्लेषण गर्ने बेला पनि भएको छ ।
यो बेला महिला आन्दोलनकारी पनि बोलिरहेका छैनन् । महिला अभियन्ताहरू कहाँ गए भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । महिला आन्दोलनले यसलाई जुन प्रकारले उठाउन सक्नुपथ्र्याे त्यो भैरहेको छैन । दलमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक माग लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले ‘ट्याँऊ ट्याँऊ नगर’ भनेर हकार्नु भो । शायद त्यसैको असर परेर पनि महिलाहरू सडकमा नआएका हुन सक्छन् । तर यो मात्रै एउटा कारण चाहिँ होईन । ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि भएको आन्दोलनमा हामी सबै एक ठाउँमा त आयौं, तर महिला आन्दोलन पनि राजनीतिक रूपमा असाध्यै विभाजित भएकोले त्यसले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।
भारतमा यहाँ जस्तै बलात्कारका घटना बढे । तर त्यहाँको नागरिक समाज बलात्कारविरुद्ध यसरी सडकमा आयो कि त्यसले आन्दोलनकै स्वरूप धारण ग¥यो । त्यसको नेतृत्व पुरुषले गरेका थिए । संसदमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजायँ दिइनुपर्छ भन्ने बहस चल्यो । संसदमा भएको बहसले यसरी काम ग¥यो कि अहिले त्यहाँ १० बर्ष मुनिका बालिकाहरू बलात्कृत हुन छाडेका छन् ।
सबै पुरुषहरू बलात्कारी हँुदैनन् । विकृत मानसिकता भएका केही पुरुषहरूले अरुलाई पनि लाजमर्दाे अवस्थामा पु¥याइदिएका छन् । तर पुरुषहरू त्यसरी लजाएर बस्ने बेला होइन यो । उनीहरूले पनि उठ्नु प¥यो । बलात्कार जस्तो अपराधमा पुरुषहरू नै अगाडि आउनु पर्छ । जुन प्रकारका घटना भैरहेका छन्, त्यो यति संवेदनशील कुरा हो कि यतिखेर बलात्कारविरुद्ध मास ¥याली हुनुपथ्र्याे । देश ठप्प हुनुपथ्र्याे । यो महिलाको आत्मसम्मानसँग मात्र जोडिएको कुरा होइन । यो त राष्ट्रकै इज्जतको पनि कुरा हो ।
एकातर्फ हामी एकदमै प्रगतिशील बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं भनेर विश्वले मानिरहेको छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व संसारमा कहिँ पनि छैन, हामीकहाँ छ । स्थानीय निकायमा त अझ महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीशजस्ता उच्च पदमा महिलाहरू आउनु भएको छ । यसले एकातर्फ गर्व गर्ने अवस्था छ भने अर्काेतर्फ एउटी आमालाई आफ्नो बच्चालाई नागरिक प्रमाणित गर्न ठूलो हिनताबोधबाट गुज्रिनु परिरहेको छ ।
बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाको नागरिकता बनाउन उसको बाउको पहिचान खुलाएर ल्याउन भनिन्छ । यो भन्दा ‘ह्यूमिलेसन’ के होला ? वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बलात्कारमा परी गर्भ बोकेर स्वदेश फर्किनु परेका महिलाहरूले कहाँ खोज्न जाने बच्चाको बाउ ? एकातर्फ बलात्कारको यातनाबाट गुज्रिएर आउनु परेको छ भने अर्काेतर्फ आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिलाउन थप यातना झेल्नु परिरहेको छ । अहिले बनाइएको कानून जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यो महिलाको निम्ति पश्चगामी कानून हुनेछ ।
यो बन्यो भने हामीले भर्खर माथि उठ्न थालेको महिला आत्मसम्मानलाई फेरि गिराउने छौं । महिलाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको ठानिनेछ । यस्तो कानून ल्याएर महिलालाई ‘तिमीहरूको अस्तित्व छैन, तिमीहरू पुरुषकै छत्रछायाँमा हिँड्नुपर्छ भन्ने याद दिलाउन खोजिएको छ । यसले तमाम पीडित आमा र तिनको कोखबाट जन्मिएका देशका भोलिका कर्णधारहरूलाई ठुलो असर पार्नेछ ।
(मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका अध्यक्ष तथा घट्ना र विचार साप्ताहिकका सम्पादक बबिता महिला अधिकारकर्मी हुन् ।)
Tags: Babita Basnetissue-1अंक-१बबिता वस्नेतबलात्कार विमर्श
बलात्कारी बाबुको नामबाट नागरिकता लिन नचाहनेले के गर्ने ?